२३ मङ्सिर २०७६ | December 9, 2019
डरलाग्दो सैलुन, जहाँ तरबार र आगोले कपाल काटिन्छ (भिडियोसहित)
२९ बैशाख २०७३
एजेन्सी । दुनियामा यस्ता सैलुनपनि छन् जुन सुन्दैमा अचम्म लाग्छ । स्पेनमा यस्तो डरलाग्दो सैलुन छ जहाँ कैँचीले होइन, आगो र तरबारले कपाल काटिन्छ । हेयर स्टाइलिस्ट अल्बर्टो ओलमेडोले संचालन गरेको सैलुनमा तरबारका साथै आगो निकाल्ने टर्च अर्थात् ब्लो टर्चबाट कपाल काटिन्छ । तरबार र आगोसँगै स साना कैँची पनि प्रयोग हुन्छ । ब्लो टर्चको प्रयोग ग्राहकको रुची अनुसार गरिन्छ । अर्थात् कपालमा आगो लगाउने…विस्तृत समाचार »
​समय के हो ? हेर्नुहोस् समयको महत्व दर्शाउने उत्कृष्ट भनाईहरु
हामी जहिलै भनिरहन्छौँ समय भएन । यो काम गर्ने भन्या आजपनि समय मिलेन । वास्तममा मानिसलाई समय छोटै हुन्छ । यद्यपी मानिसले समयको व्यवस्थापन भने आफै गर्नुपर्छ । समय निकै बलमान हुन्छ । समयको महत्वका विषयमा यस्ता छन् उत्कृष्ट भनाईहरु: “समय तपाईको जीवनको सिक्का हो । यो तपाईको साथ रहेको एकमात्र सिक्का हो त्यो तपाईले नै तय गर्न सक्नुहुन्छ कि यसलाई कसरी खर्च गर्नुपर्दछ ।…विस्तृत समाचार »
विश्वका यी भवन जसको आकृति र बनावटले सबैलाई अचम्म पारेको छ
२९ बैशाख । विश्वका यस्ता भवन जसलाई देखेर तपाई अचम्ममा पर्नुहन्छ । यिनीहरुको आकृति देखेर जो कसैको श्वास रोकिन सक्छ एकैछिन भएपनि । यी सबै भवनले सर्वश्रेष्ठ आर्किटेक्चर ए प्लस पुरस्कार पाएका छन् । हेरौ विश्वका यी सर्वश्रेष्ठ भवन । १ .यो कतारको एक ठलो स्पा तथा रिसोर्ट हो । यसलाई ओफेनहिम आर्किटेक्चर कम्पनीले बनाएको हो । यसको शौन्दर्यले सबैको ध्यान खिचेको छ । यसले…विस्तृत समाचार »
​किन भने देउवाले म्यादी सरकार, यस्तो थियो प्रचण्ड देउवाको गोप्य सम्झौता
२८ बैशाख २०७३
२८ वैशाख, काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले वर्तमान सरकारलाई म्यादी सरकारको उपनाम दिएपछि म्यादी शव्दले चर्चा पाएको छ । प्राय चुनावमा मात्र आउने यो शव्द देउवाले संसद्मा प्रयोग गरेपछि सबैले ओली सरकारलाई म्यादी सरकार भन्न थालेका छन् । देउवाले सरकारलाई म्यादीको उपनाम दिएपछि सरकारको आयु धेरै दिन नभएको सबैले आकंलन गरिसकेका छन् । सरकार फेर्ने भारतको योजना असफल भएको बताइरहेका बेला यसअघि पनि…विस्तृत समाचार »
​देउवाले मुख खोले –म्यादी सरकारले महत्वाकांक्षी योजना ल्याउन मिल्दैन
२८ बैशाख काठमाडौ । नेपाली कांग्रेसका सभापति तथा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवाले नगरपालिकाको पुनसंरचना आयोगको प्रतिवेदन नआउँदासम्म स्थानीय चुनाव हुन नसक्ने बताएका छन् । सरकारले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममाथि आफ्ना आधारणा राख्दै देउवाले भने–‘चुनाव हुनुपर्छ भन्नेमा आफुहरुपनि रहेपनि बालानन्द पौडेल आयोगको प्रतिवेदन नआई स्थानीय निकायको चुनाव गराउने कुरा त्यति व्यवहारिक नहुने बताए । काठमाडौं–हेटौंडा द्रुत माग निर्माणमा स्वदेशी लगानी गर्ने कुरा ‘इमोसनल’…विस्तृत समाचार »
​सामाजिक सञ्जालमा चर्चित बनेका यी रोमाञ्चक तस्विर
सामाजिक सञ्जालको विस्तार र यसमा आवद्धताको कुरा अब करोडमा होइन अबौँ संख्यामा भइसकेको छ । इन्टरनेटको दुनियामा सबैभन्दा शक्तिशाली र प्रभावकारी बनेको छ सामाजिक सञ्जाल । एकअर्कामा जोडिन मात्र होइन सूचना, जानकारीमा पनि यो निकै सशक्त छ । सामाजिक सञ्जालमा आउने केही तस्विर यसरी भाइरल बन्दिन्छन् कि जुन क्षणभरमा अबौँ संख्याले देखिसकेको हुन्छ । यसरी आउने तस्विर कतिपय वास्तविक हुन्छन् भने कतिपय फोटोसपबाट डिजाइन गरिएका…विस्तृत समाचार »
माओवादीलार्इ एमाओवादी नफापेपछि..... अब एमाओवादी नरहने
२७ बैशाख २०७३
२७ बैशाख काठमाडौ । एकीकृत नेकपा माओवादी नाम अब नरहने भएको छ । एकीकृत माओवादी र नेकपा क्रान्तिकारी माओवादीको रामबहादुर थापा बादल समूहवीच एकताको अन्तिम तयारी भइरहेका बेला नाम पनि परिवर्तन गर्ने तयारी गरिएको बतायएको छ । नाम के राख्ने भन्ने अन्तिम निर्णय हुन वाँकी रहेको र सकेसम्म शुरुमै रहेको नेकपा माओवादी नाम राख्ने तयारी भएको छ । अहिले यो नाम मात्रिका यादवले आफ्नो पार्टीको राखेका छन्…विस्तृत समाचार »
मोदीको डिग्री सर्टिफिकेट विवाद, विजेपीले सार्बजनिक गर्यो प्रमाणपत्र, आप भन्छ प्रमाण नै नक्कली
२७ वैशाख काठमाडौ । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको डिग्री विवादले भारतमा ठुलो तरंग ल्याइदिएको छ । दिल्लीका मुख्यमन्त्री तथा आपका प्रमुख नेता अरविन्द केजरीवालले मोदीको दिल्ली विश्वविद्यालयको डिग्री फर्जी भएको दाबि गरेपछि यसले भारतमा हंगामा मच्चाइरहेको छ । केजरीवालको दाबिलाई झुठो भएको बताउँदै बिजेपीले पत्रकार सम्मेलन गर्दै मोदीको बिए र एमएका प्रमाणपत्रहरु सार्वजनिक गर्दै पत्रकारहरुमाझ बाँडेका थिए । बिजेपी अध्यक्ष साहले केजरीवालले निम्नस्तरको व्यवहार देखाएको…विस्तृत समाचार »
ओली सरकार ढाल्न खोज्ने भारतलाई हालसम्मकै ठूलो झट्का दिने ओलीको तयारी
२७ वैशाख, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको भारत यात्रा रद्द गर्ने र भारतमा रहेका नेपाली राजदूत दीपकुमार उपाध्यायलाई फिर्ता बोलाउने कठोर निर्णयपछि भारतलाई अर्को ठूलो झट्का दिने तयारी गर्दैछन् । आफ्नो सरकार ढाल्ने भारतीय योजना असफल पारेपछि भारतीय पक्षसंग निकै चिढिएका ओलीले भारतलाई ‘देखाई दिने’ मूडमा रहेको स्रोतको दाबी छ । भारतलाई एकपछि अर्को लगातार दुई झटका दिएका ओलीले अब तेस्रो र…विस्तृत समाचार »
​ओली सरकारको नीति तथा कार्यक्रमबारे ज्योतिषको अनौठो भविष्यवाणी
२६ बैशाख २०७३
२६ वैशाख, काठमाडौं । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले घोषणा गरेको नीति तथा कार्यक्रमबारे विभिन्न क्षेत्रमा टिकाटिप्पणी सुरु भएको छ । यसमा ज्योतिषहरुको धारणा आउन पनि थालेको छ । उनीहरुले राष्ट्रपति विद्या देवी भण्डारीले आइतबार घोषणा गरेको ओली सरकारको नीति तथा कार्यक्रम अगाडि बढ्न नसक्ने संकेत गरेका छन् । चर्चित ज्योतिष सुनील सिटौलाले ओली सरकारको नीति तथा कार्यक्रम उत्तम भएपछि कार्यान्वयमा कठिनाइ…विस्तृत समाचार »
‹ First Newer 996 997 998 999 1000 Older Last ›
बूढीगण्डकीको मुआब्जाबारे सरकारसँग वार्ता गर्ने जिम्मा बाबुराम र नारायणकाजीलाई
२ मंसिर, काठमाडौं । बूढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनाका प्रभावित क्षेत्र गोरखातर्फ आरूघाट र धादिङतर्फ खहरेको मुआब्जा पुनरावलोकन गर्न समिति बनाइएको छ । गोरखा र धादिङ जिल्लाबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सांसद, पूर्वसांसद, पूर्वमन्त्री, जनप्रतिनिधिहरू र सरोकारवाला समितिका प्रतिनिधि सम्मिलित वार्ता टोली बनाइएको हो । मंसिर १६ गते जिल्ला प्रशासन कार्यालय र बूढीगण्डकी आयोजनाले प्रति रोपनी ५० हजारदेखि सात लाख रूपैयाँसम्म दिने गरी मुआब्जा निर्धारण गरेपछि प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाले विरोध गर्दै आएका थिए ।
विश्व युवा संगठनको उपाध्यक्षमा युवा संघ नेपाल निर्वाचित
२२ मंसिर, काठमाडौं । विश्व प्रजातान्त्रिक युवा संगठन (डब्लुएफडीवाई)को उपाध्यक्षमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) निकट राष्ट्रिय युवा संघ नेपाल निर्वाचित भएको छ । साइप्रसमा भएको संगठनको २० औँ अन्तरराष्ट्रिय सम्मेलनले संघलाई उपाध्यक्षमा निर्वाचित गरेको संघका केन्द्रीय सदस्य नरेश शाहीले जानकारी दिए । संघको प्रतिनिधित्व गर्दै सुन्दर भुसाललाई उपाध्यक्षको जिम्मेवारी बहन गर्न प्रतिनिधिको रूपमा पठाइएको छ । भुसाल यसअघि संगठनको एशिया प्यासिफिकको उपाध्यक्षसमेत थिए । यही डिसेम्बर २ देखि ७ गतेसम्म चलेको सम्मेलनमा विश्वका ६३ देशका ९५ युवा संगठन सहभागी थिए ।
सार्क स्थापनाको पैँतीऔँ वर्ष : १९ औँ शिखर सम्मेलन अन्योलमा
२२ मंसिर, काठमाडौं । दक्षिण एशियाको गरिबी निवारण, क्षेत्रीय सुरक्षा र आर्थिक विकासको मुख्य लक्ष्य लिएर सन् १९८५ डिसेम्बर ८ मा स्थापना भएको ‘दक्षिण एशियाली क्षेत्रीय सहयोग सङ्गठन’ (सार्क) विभिन्न आरोहअवरोह पार गरी ३५ औँ वार्षिकोत्सव मनाउँदैछ । सन् १९८५ डिसेम्बर ७ र ८ मा बङ्गलादेशको ढाकामा प्रथम सम्मेलन गरी सार्कको यात्रा सुरु भएको हो । सार्कको स्थापनाका समयमा भूमिका निर्वाह गर्ने तत्कालीन राष्ट्ररसरकार प्रमुख नेपालका तत्कालीन राजा वीरेन्द्र वीरविक्रम शाहदेव, बङ्गलादेशका राष्ट्रपति हुसेन मोहम्मद एर्शाद, भूटानका राजा जिग्मेसिङ्गे वाङचुक, भारतका प्रधानमन्त्री राजीव गान्धी,
इराकमा भएको सरकार विरोधी आन्दोलनमा मर्नेको संख्या चार सय नाघ्यो
२२ मंसिर, काठमाडौं । इराकको राजधानी बगदादमा अज्ञात व्यक्तिको गोली प्रहारबाट सात जनाको मृत्यु भएको छ । बन्दुकधारीको गोली लागेर कयौं घाइते भएको बताइएको छ । घाइतेको अवस्था गम्भीर रहेकाले मृतकको संख्या अझै बढ्न सक्ने बताइएको छ । ट्रकमा आएका बन्दुकधारीहरुले अल सिनाक पुल नजिकै एउटा व्यापारीक भवनमा गोली प्रहार गरेको प्रत्यक्षदर्शीलाई उध्रित गर्दै बीबीसीले जनाएको छ । सरकार विरोधी प्रदर्शनहरु जारी रहेका बेला बन्दुकधारीहरुले जथाभावी गोली चलाएर सर्वसाधारणलाई त्रसित पार्न खोजेको आन्दोलनकारीहरुले आरोप लगाएका छन् ।
इरान र अमेरिकाले कैदीबन्दी साटासाट गर्ने !
२२ मंसिर, काठमाडौं । इरान र अमेरिकाले पछिल्लो समय बढ्दै गएको एक अर्काबीचको तनाव अन्त्य गर्न कैदीबन्दी साटासाट गर्ने निर्णय गरेका छन् । तेहरानले अमेरिकाबाट इरानी वैज्ञानिक मसुद सोलिमानीलाई रिहा गर्ने घोषणा गरेको छ । केही दिनअघि अमेरिकाले प्रिस्टनमा अध्ययनरत एक इरानी विद्यार्थी घर फर्किएको बताएको थियो । इरानी विदेशमन्त्री मोहम्मद जावेद जरीफले बन्दी बनाइएको चिनियाँ मुलका अमेरिकी नागरिक झियु वाङलाई चाँडै नै परिवारको जिम्मा लगाइने बताएका छन् । उक्त कदमको पुष्टि गर्दै राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रपलेसमेत आफ्ना नागरिकलाई स्वागत गर्न आतुर रहेको बताएको ह्वाइट हाउसले जनाएको छ ।